Thursday October 18, 2018 - 08:11:53 in Wararka by Super Admin
Dowladda Uganda ayaa xaqiijisay in ciidamo looga dilay dagaal culus oo maalmo ka hor ka dhacay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya sida uu xaqiijiyay Afhayeen Melleteri.
Lt. Col. Deo Akiiki oo ah ku xigeenka Afhayeenka Melleteriga Uganda ayaa wakaaladda wararka Shiinaha Xinhua u sheegay in ugu yaraan 2 Askari looga dilay dagaal Talaadadii lasoo dhaafay ay ciidamada Uganda kula galeenxoogagga Al Shabaab magaalada Markaxilli halkaas uu ku sugnaa Max'med Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda Federaalka.
"Ciidamadeenna kamidka ah Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa weerar dhabbagal ah kala kulmay dagaalyahannada Al Shabaab laba Askari ayaana noogala dilay weerarka xilli uu magaalada Marka booqanayay Farmaajo" ayuu Afhayeenka melleteri ee u hadlay dowladda Uganda Khadka taleefanka ugu sheegay wakaaladda Wararka Shiinaha.
Col. Deo Akiik wuxuu xaqiijiyay in ciidamada Uganda ee ku sugan magaalada Marka ay la kulmeen weerar gaadma ah islamarkaana ay jiraan ciidamo kale oo si xun ugu dhaawacmay dagaalkii dhacay talaadadii lasoo dhaafay balse wuxuu ka gaabsaday in uu carrab dhabo magacyada askarta dhaawacantay iyo kuwa dhintay.
Wuxuu sheegay in faah faahin dheeri ah oo ku saabsandagaalkii magaalada Markaiyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay ay ka sugayaan howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya.
Sida Muuqata Dowladda Uganda ayaa shacabkeeda ka qarinaysa khasaaraha lixaadka leh ee kasoo gaaraydagaalkii magaalada Marka, Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo warbaahinta uga warbixisay dagaalkii ka dhacay Xarunta Sh/Hoose ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay dileen 15 Askari Yugaandheys ah islamarkaana ay saanado hub ah ka qabsatay shisheeyaha.